Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo weerarkii Al-Shabaab ku tilmaamay “Cadowtooyo Daran” – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo weerarkii Al-Shabaab ku tilmaamay “Cadowtooyo Daran”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa ku tilmaamay mid muujinaysa cadawtooyada ay Al-Shabaab u qabaan Shacabka Soomaaliyeed weerarkii qaatay saacadaha badan ee ay Ciidanka Dowladdu shalay ku soo af-jareen Wadada Maka al-Mukaramah ee magaalada Muqdisho.
“Waan cambaareynayaa weerarkaasi, oo ah mid muujinaya baaxadda ay la egtahay cadowtinimada nabad diidka ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed” ayuu Guddoomiye Mursal ku yiri war lagu daabacay wabsaydka Radio Muqdisho, isaga oo la wadaagaya shacabka sida ay u danqisay dhacdadaas ay dad badan ku dhinteen, kuwana ku dhaawacmeen, islamarkaana ay ku burburtay hanti fara badan.
Ciidanka Dowladda ayuu Guddoomiye Mursal ku ammaanay sida ay u maareeyeen weerarkaas, “iyaga oo soo badbaadinaya” buu yiri “shacab ay guryahooda ku dhex dagaalamayeen Xubnaha Al-Shabaab ee weerarkaas geystay”. “Waxaan u mahad celinayaa Ciidankeena Amaanka, oo soo badbaadiyay shacabkii maleeshiyaadka ay guryahooda ku qabsadeen” ayuu yiri Mursal.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal, oo hadda jooga magaalada Ammaan ee caasimadda dalka Jordan, waxa uu sheegay iney Ciidanka Dowladdu dadaal xoog leh ugu jiraan baabi’inta jiritaanka Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaan ciidanka ku ammaanayaa dadaalka ay ugu jiraan cirib tirka kooxaha argagixisada ah” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.